ကဗျာ Archives - myanmarpyi.com
မင်းကိုတွေ့နေရတဲ့ရတဲ့ အခိုက်အတန့်က… နှလုံးသားကို ကြည်နူးစေတယ် သတိရစေတဲ့ အနမ်းလေးတွေကို ဆာလောင်စေတယ် လွမ်းနေတဲ့ အတိတ်တွေကို အိမ်မက်အဖြစ်ဖော်ဆောင်စေတယ် ရူးသွပ်စေတဲ့ အပြုအမူတွေကို ပေါ်ပေါက်စေပြီး ချိုမြိန်တဲ့ ကဗျာလေးတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တယ် သံစဉ်တွေတေးသွားတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ် တစ်ခုစီတိုင်းကို ခံစားမှု့ဖြစ်ပေါ်စေတယ် ဒါပါဘဲ ငါနင့်ကိုသိပ်ချစ်တယ် ရင်နှင့်ရင်း၍ #ShweAungKhant
လိုချင်ပါလျက်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တို့မရှိဘဝတစ်ခုလုံး အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဒဏ်ရာတွေ အမှန်တရားတွေ ကံတရားကို ပြောပြနေသော်လည်း ပြင်ဆင်ခွင့်တို့ မရှိ ချစ်နေအုန်းမယ် လွမ်းနေအုန်းမယ် ဒီဘဝဆုံးသည်အထိ အမုန်းတရားဆိုတာမရှိစေရဘူး ဒီကတိတွေလဲ မမေ့ပါဘူး သတိတွေ ရနေအုန်းမှာဘဲ မင်းနဲ့အတူ ရှိဖူးခဲ့ အမှတ်တရ နေ့ရက်တွေ လွှမ်းမိုးထား ခဲ့သောမင်းပုံရိပ် သေသည့်တိုင်အောင်ရှိနေမယ် ဒီရင်ဘတ်ကြီးထဲ… #ShweAungKhant
I need wings (again)
ပျံသန်းခွင့်တွေမရှိတော့ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်လွတ်လပ်မှု့တွေရဲ့ အရသာကိုပြန်လိုချင်တယ် မဖြစ်နိုင်မှန်းသိလျက်နဲ့တမ်းတနေမိတဲ့ပျော်ရွှင်မှု့တွေကိုလဲ ရိုက်ချိုးမယ် စိတ်ညစ်မှု့တွေ ရှိနေတော့အရက် ဆိုတာငါ့အတွက် ဖြေဆေးတစ်ခုလိုပါဘဲ ပြန်ပေးပါ ငါ့အတောင်ပံတွေကျေးဇူးပြုပြီးလှောင်အိမ်ထဲကလွှတ်ပေးပါငါအရမ်းပျံသန်းချင်လို့ပါ တနေ့ငါ့အတောင်ပံလွတ်လပ်မှု့တွေ ရမဲ့တနေ့ငါမျှော်နေအုန်းမယ်… #ShweAungKhant
ပျားသကာရည်နဲ့မလဲနိုင်ဘူး မင်းအနမ်းတွေက ချိုနေခဲ့တာ ဆောင်းတွင်းမီးတွေလှူံနေကြတာ မင်းရင်ခွင်ထဲမရောက်ဖူးလို့နေမယ် တောင်ပေါ်ဒေသ နေဝင်ဆည်းဆာ မင်းအပြုံးတွေကို ဘယ်မှီမလဲ ကြယ်စင်တွေလဲမရေနိုင်ခဲ့ဘူးရယ် မင်းမျက်ဝန်းလေးတောက်ပနေခဲ့တာ လမင်းကြီးကိုလဲမမြင်နိုင်ဘူးလေ မင်းအိပ်ပျော်နေတာလေးကလှနေခဲ့တာ
အချစ်ဆိုတာခဏလေးအတွင်းမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ ခံစားမှု့တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်… ခဏလေးနဲ့ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အချစ်…အချစ်…ဆိုတဲ့အရာဟာ လေးနက်တယ်… သိမ့်မွေ့တယ်… နူးညံ့တယ်… အများကြီးဘဲ ဖွင့်ဟချက်တွေ ………. ………. ငါ… အချစ်ဆိုတဲ့အရာကို…
စက်ရုပ်တစ်ရုပ် အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်… ဒါပေမယ့် ထိုစက်ရုပ် တကုပ်ကုပ်နဲ့ အလုပ်မအား Online သုံးကာ ရှုပ်နေရ… ထိုအရာကား စက်ရုပ်ကြီး၌ ပါလာသော ဂီတသံစဉ် အနုပညာ တစ်ခုတည်းပါကား ရှိလှပါသော်လည်း ကျန်တာအားလုံးမူကား မြန်မာပေါ်လစီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဝတ်ကျေတန်းကျေဘဲ ရှိလှပါပေသည်…
ငါတို့ကို လွမ်းဆွတ်စေမဲ့ အတာသကြန် ရောက်လာတော့မယ် ချစ်သူရေ… သိပ်ချစ်တဲ့ နင်နဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင်ချင်တယ်… သကြန်ရေလေးလောင်းခွင့်မရလို့ ဝမ်းနည်းမိတယ် ချစ်သူရယ်… ဘယ်အချိန်ဆုံနိုင်ခွင့်ရမလဲဆိုတာ မသေချာသေးတဲ့ ငါတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်အတွက် အမှတ်တရနေ့တွေတိုင်းက ဘယ်လောက်ကြေကွဲဖို့ ကောင်းလိုက်လဲ ချစ်သူရယ်… ယုံကြည်နေမှာပါ ချစ်သူ တစ်နေ့နေ့တော့ ငါတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်လဲ တစ်ခြားချစ်သူတွေလို အတူတူပျော်ရွှင်ခွင့်ရမဲ့နေ့ဆိုတာ ရောက်လာမှာပါ… (အရမ်းလွမ်းတယ် ချစ်သူရယ်…)
ဘယ်သူမှမလိုဘူး ဂစ်တာတစ်လက်ရယ် သီဆိုမယ့် မင်းရယ် သံစဉ်တွေကိုသယ်ဆောင်ပေးမယ့် လေညှင်းလေးရယ် အရိပ်ကောင်းကောင်း သစ်ပင်လေးတွေအောက်မှာ နေဝင်ချိန်လေးတွေနဲ့အတူ ငါတို့တီးခတ်သီဆိုကြမယ် ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်ဖို့ သံစဉ် တွေက အဖော်မွန်ပါဘဲ ဒါပါဘဲ ဘယ်သူမှမလိုပါဘူး… နင်ရယ်ငါရယ် ဂစ်တာလေးရယ်…
ကိုယ်ပိုင်ကောင်းကင် ရှိနေချင်တယ် နေရောင်ခြည်နဲ့ လွတ်လပ်ဝန်းကျင်သစ် ရချင်တယ်… ရင်ဖွင့်ခြင်း ခွန်အားသစ်နဲ့ ကိုးကွယ်မှု့မျဉ်းကြောင်း ဖြောင့်တန်းချင်တယ် ကျိန်းသေတဲ့ ဘဝတည်ဆောက်ဖို့ ငါ့မှာ… ဒဏ်ရာများစွာရှိတယ်… Credit သျှပ်ကြီး ခ ကိုငှက်
ဘယ်သူမှမလိုဘူး ဂစ်တာတစ်လက်ရယ် သီဆိုမယ့် မင်းရယ် သံစဉ်တွေကိုသယ်ဆောင်ပေးမယ့် လေညှင်းလေးရယ် [Read More]
Gerunds & Infinitives Part I Gerunds & Infinitives [Read More]
Subject-Verb Agreement Part I 💎 Subject-Verb Agreement ဆိုတာ ဘာလဲ။ ✍ [Read More]